Profile Company - Honghui Daily Appliance Co., Ltd
gacanta lagu dhaqo,
sheet daawada dharka lagu dhaqo
Dhaqid saabuunta kaabsoosha
O ur kooxda
Guangzhou HONGHUI DAILY TECHNOLOGY CO., LTD waa soo saaraha xirfad iyo dhoofiyaha ka badan 20 sano, ku hawlan cilmi baarista, horumarinta, iibka iyo adeegga daryeelka afka, daryeelka maqaarka iyo alaabooyinka timaha. GMP, FDA, CE, dalkaas waxaana la ogolaado. HONGHUI leeyahay R xirfadeed & D kooxda iyo xulka QC in loo hubiyo tayada iyo adeega-iib aheyn ka dib. Waxaan leenahay wata magac gaar ah noo, sida: House nool, Bright up, ruxruxo Sea, Fantadent, Dentifresh iwm sidoo Waxay iibiso America, Latin America, Europe, Sacuudi Carabiya, Malaysia, Australia ECT. Sannad kasta, waxaan ka qeyb gali doona in ay si cadaalad ah Canton, Dubai cadaalad Hijmans cadaalad ECT, si aynu halkaas kula kulmi.
O ur taariikhda
HONGHUI soo dhaweyn OEM iyo ODM amarada. Waxaan leenahay kobciyo waayo-aragnimo in ay bixiyaan adeeg calaamad gaar ah, oo aan la supermarket iyo dowladda amarada shaqada. Halkan ayaa injineer xirfadeed iyo naqshadeeye taagan idiin!
HONGHUI dhaqanka ganacsi:
Qiimaha waa "Dadka u janjeedha, wadaaagin macaamiisha. "
Ruuxa Team waa" Masuuliyada, share, koritaanka, hal-abuurnimo. "
Howlgalka waa" Hagaajinta nolosha dadka, la abuuro caafimaadka ah oo dunida oo cad. "Aan gacanta ee gacanta si ay u abuuraan dunida beauty a!
hormone koritaanka Human (HGH): Ma hakin ...
Kobaca shidaalka hormone koritaanka carruurnimada iyo waxey kaloo unugyada iyo xubnaha nolosha oo dhan. Waxaa la soo saaray qanjirka pituitary Inyar qiyaasta-digirta ah - oo ku yaalla salka of maskaxda. Laga bilaabo da'da dhexe, si kastaba ha ahaatee, t ...